Fanavaozana hanatsarana ny fampifanarahana ny Playlists | Avy amin'ny mac aho
Javier Porcar | | iTunes, About us, OS X El Capitan
Betsaka ny ohatra nasehon'i Apple filokana mafy handao ny iTunes amin'ny haavon'ny hatsarana mendrika azy. Avy amin'ny 12.4 version: famerenana ny laoniny ny maro amin'ireo sariny, mahatonga ireo izay ampiasaintsika matetika ho lehibe kokoa, ary koa ny fangatahana saika ankapobeny ny famerenana ny sidebar. Mety Apple dia mikasa ny hanonitra ny fotoana very amin'ny kinova 12.4 azontsika atao ny misintona azy hatramin'ny Mey lasa teo. Raha omaly izahay dia naneho hevitra momba ny fanatsarana ny serivisy Apple Music tafiditra ao amin'ny iTunes, androany dia naneho hevitra momba ny fanatsarana farany natolotry ny andiany 12.4.3.
Toa nisy mpampiasa sasany nitatitra olana tamin'ny playlist. Ny lesoka dia nitranga rehefa nanao izahay fanovana ny lisitry ny lisitry ny lisitry ny lisitry ny iPhone, iPod na iPad, ary tsy naterina tamin'ny lisitry ny iTunes. Azo alaina ao amin'ny App Store ny fanavaozana, asehonay anao:
Tsy vao voalohany i Apple no manana olana amin'ny fampifanarahana eo anelanelan'ny fitaovana, na dia nahita fanatsarana tsy tapaka aza isika indrindra avy amin'ireo kinova farany indrindra: Mac OS X El Capitan e IOS 9
Ity fanavaozana fahatelo an'ny kinova 12.4 ity. ao anatin'ny fotoana fohy, manondro izany fa ny bandy avy ao Cupertino dia mifantoka amin'ny fampiharana ilay application. Araka ny hitantsika tao amin'ilay lahatsoratra navoaka momba ny fanavaozana iTunes mankany amin'ny kinova 12.4.2 . Amin'izany fanavaozana izany nametraka olana tamin'ny filalaovana hira latsaky ny iray minitra.
Raha tsy misy fihemorana vaovao, ity no tokony ho fanavaozana iTunes 12 farany teo. Ireo izay mampiasa tsy tapaka ity rindranasa ity dia maniry hahita ny kinova farany an'ny iTunes 13 izay antenaina haseho miaraka Mac OS Sierra ny herinandro farany septambra na herinandro voalohany amin'ny volana oktobra. Manantena izahay fa hisy fanavaozana ny fampiharana saika amin'ny volohany, tsy ny fanasana tarehy fotsiny amin'ny sehatra hatsarana, fa koa ny fanatsarana ny fiasa anatiny.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple products » iTunes » Vaovao farany iTunes amin'ny kinova 12.4.3 hamahana ny olana amin'ny playlists
Eto aho, hizaha raha mamela ahy hamerina hira very iray
Apple Music dia efa misy any Korea Atsimo
Apple hanangana programa valisoa vaovao hanatsarana ny fiarovana amin'ny ankapobeny